Ihe mmetụta igwefoto 64MP nke Samsung ga-abata na Galaxy A70s | Gam akporosis
Galaxy A70S ga-enwe igwefoto 64MP mara mma nke Samsung
Ọ bụrụ na anyị amaraworị ihe mmetụta igwefoto 64MP ọhụrụ si Samsung na mmalite nke ọnwa, ugbu a anyị maara na Galaxy A70S nwere ike ibu Nke a ihe mmetụta nke South Korea ika. Nnọọ ihe ijuanya maka ihe mmetụta nke nwere ike dethrone nke Sony ya na 48MP.
Ihe omuma ohuru a bu anya ka o buru uzo bia dị ka nke mbụ maka 10 Galaxy Note na-esote site na ụlọ ọrụ Korea, mana ọ dị ka ọ ga-abịarute n'oge na Galaxy A70s, ekwentị nwere njirimara ole na ole, mana nke ahụ ga-enwe ihe mmetụta ọhụụ ọhụrụ a.
Ekwentị ọzọ ga - abụ wepụtara na afọ a ọ ga-ejikwa ihe mmetụta ISOCELL Bright GW1, nke akọwapụtara dị ka igwefoto igwe nwere ọnụ ọgụgụ kacha elu nke pikselụ na ahịa. Ọ bụ ezie na na mbụ ị nwere ike iche na foto ga-agafe 16MP, ha ga-adị obere karịa ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị nọ n'ihu ihe mmetụta 64MP.
Otu kachasị na uru nke ihe mmetụta Samsung a bụ nke ahụ jikọta pikselụ 0,8um anọ n'ime otu n'ihi na ihe oyiyi na karịsịa na ndị pụrụ iche ala ìhè ọnọdụ. Ọ bụ otu n'ime ihu nke nnukwu ụlọ ọrụ dị iche iche mepere yana na n'abalị, anyị na-ahụ ihe atụ kachasị nke ịnwa ịchọta ihe ngwọta iji melite foto; n'ezie anyi nwere ugbu a nweta nkwalite na Galaxy S10 n'echiche a.
Banyere Galaxy A70S, ọ ga-abụ n'ihu nke A70 gara aga nakwa na o nweela igwefoto azụ atọ, ya mere o yiri ka Samsung chọrọ ịkwalite omume ọma ndị ahụ nke na ọ nweghị onye na-asọ mpi na mpaghara ahụ. Na ọ na-eburu igwefoto igwefoto Samsung ọhụụ pụtara na akara Korea achọghị ịhapụ ahịa ahịa nke pụtara ọtụtụ nde mmadụ ndị na-ahọrọ ịghara imefu ọtụtụ ihe na ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Galaxy A70S ga-enwe igwefoto 64MP mara mma nke Samsung
Stabledị nsụgharị mbụ nke ihe nchọgharị Tor Browser bịarutere na gam akporo
Redmi K20 nwere ike ịnya isi ọnụahịa dị oke ala